Santander, munzira inoenda ku5 euros? | Ehupfumi Zvemari
Santander, munzira inoenda ku5 euros?
Imwe yemaitiro akakosha emari inoshanduka yenyika seBanco Santander iri pamharadzano mukuenderana nemitengo yayo. Hazvizivikanwe zvakanyanya kana mugove uchigona kuenda kumaeuro matatu kana kana, nekusiyana, unogona zvakare kupfuudza danho rekurwisa iro razvino riri pamashanu euros. Chero zvazvingaitika, idzi haisi nguva dzakanaka dzechikamu chebhangi pamusika wemasheya. Kuwa kwake kwave kwakadzika kwazvo Uye zvakanyanya, vanogona kupfuuridzirwa mumwedzi inotevera. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Parizvino, mitengo yavo iri pakati pe4 ne5 euros pamugove uye izvo zvinokonzeresa varimari vadiki nepakati kuti vasazive zvekuita. Kunyangwe kutora chinzvimbo kana kugara mune yakanyanyisa kukwana kwemari kutora mukana wenguva dziri nani mumitengo yavo. Chero zvazvingava, zvikamu zveBanco Santander zviri kuita zvirinani kupfuura vakwikwidzi vayo mukati meinosarudzwa indekisi yemabhizimusi, iyo Ibex 35. Iyo yakakosha, BBVA kuti mumwedzi mishoma yakabva pakutengesa 8 euros kusvika kungopfuura 4.
Zvakare, hazvigone kukanganwika kuti chikamu chemabhengi chiri chimwe chezvinhu zvinotyisa zveSpanish equities. Chinhu chaive chisingafungidzike zvachose mune mamwe makore kwete kure zvakadaro. Nesimba rakasiyana pakati pavo kunonyanyisa uye zvishoma mitengo, sezviri kuitika muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa. Pamusoro pemamwe matekiniki ayo a priori ane hunyanzvi hwekuvandudza zviito izvi mukuchinja kwemitengo yavo. Icho chiitiko chatinofanira kurarama nacho mumwedzi iri kuuya.
1 Santander: pazasi pemutengo
2 Kukura kudzokorora pasi
3 Shanduko mukambani yako yeinishuwarenzi
4 Kugadzwa kwevatungamiriri vatsva
5 Mari yepamusoro kubhangi
6 Seti yemataira pane chati chati
Santander: pazasi pemutengo
Ehe, pane chinhu chimwe chakajeka kwazvo mune ino yakakosha bhuruu chip yenyika nyika. Uye hazvisi izvo zvimwe kunze kwekuti mutengo wazvino hauna kukosheswa uye uri pasi pekufungidzirwa nevanoongorora zvemari vanopa mutengo wakanangwa uri pamusoro pemashanu euros pamugove uye mune zvimwe zviitiko zvakanaka kupfuura aya matanho. Naiyo, iyo inogona kuve yakakosha kukosha yekuongorora, kutenderera 20% Kazhinji. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yanga iri kukosha kwakashata mumisangano yekutengesa ichangopfuura.
Kusvika padanho rekudyarwa kunonanga kune yepakati uye kunyanya kwenguva refu, inogona kuve sarudzo inobatsira kwazvo kune vashoma nevapakati varimi. Kwete zvakadaro mupfupi sekusagadzikana kwakabata zviito zvaro, ne mimwe misiyano pakati peyako yakakwira uye shoma mutengo. Kune rimwe divi, zvakare inoverengera kumwe kusagadzikana kwechikamu ichi semhedzisiro yemamiriro ekubhengi eEurope mune zvese. Chinhu chimwe zvirokwazvo hachisi kubatsira kuti mutengo urambe uri pasi peiyo bullish maitiro.
Kukura kudzokorora pasi
Chimwe chikamu chinotamba chakapesana nezvido zveBanco Santander ndiko kudzokorodza kwakadzika kunoitwa ne International Mari Mari (IMF) uye izvo zvakatungamira mukugadzirisa zvakanyanya zvigaro zvavo mumazuva apfuura. Mupfungwa iyi, misika yemakambani yakarangwa mushure mekunge IMF yagadziridzwa pasi, nekuti kukura kwayo kwekufungidzira kwehupfumi hwenyika hakuna kunaka sekufunga kwevanhu. Chikamu chakanyanya kubatwa neichi chiitiko chitsva hapana mubvunzo chikamu chebhengi uye Santander nderimwe remapoka akakosha emari mukondinendi yakare.
Chero zvazvingaitika, dambudziko hombe nekudyara uku nderekuti purofiti yayo mumakore gumi apfuura yakaderera. Izvo hazvigone kukanganikwa kuti kusvika munguva pfupi yapfuura zviito zvake zvaive mumatanho e6 euros uye nemaonero avanogona kusimuka mumakore mashoma anotevera. Kune rimwe divi, haina kujoina iyo inosimudzira chiteshi iyo yaive yakanyorwa uye ichi ndicho chimwe chekusahadzika kuti kudzoka kune zvinzvimbo zveiri rine simba boka remari kunomutsa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Shanduko mukambani yako yeinishuwarenzi
Imwe yenhau idzo misika yakapa mumazuva achangopfuura yave iyoyo Mapfre ichave muridzi we50,01% yeguta guru rekambani inoguma, iyo ichabhadhara maeuro mamirioni makumi masere, uye Santander Seguros ndiye achave muridzi weakasara 82%. Bhengi rinogovera chete inishuwarenzi yemotokari, yekutengesa yakawanda-njodzi, SME yakawanda-njodzi uye inishuwarenzi yemutero yekambani nyowani muSantander network muSpain. Nekudaro, ichokwadi chekambani kuti haisi kukanganisa zvakanyanya mutengo wemitengo yayo.
Kune rimwe divi, zvinoramba zvichizoonekwa kuti matambudziko ari kukwikwidzana newe mazuva ano achakukanganisa sei, BBVA. Nekuti inogona kuve iyo yekukonzeresa kuderera kuri muchikamu kuti kusimbise zvirinani munguva ipfupi. Iko hakuna zvakare kushomeka kwevanoongorora zvemari vanonongedzera kuchinhu chekuti izvi zvinogona kubatsira zvido zveBanco Santander. Ichi chinhu chinozoonekwa muzvikamu zvinotevera zvekutengesa, mune imwe pfungwa kana imwe. Chero zvazvingaitika, ivo havasi mune yakanakira mukana wekutarisana nekusimba uye kugadzikana kukwira mumutengo wavo.
Kugadzwa kwevatungamiriri vatsva
Kana zvakare inogona kudzikisira kubva kunhau dzevatungamiriri vatsva kuBanco Santander uye kuti inogona kuumba inopfuura kamwe kusagadzikana kana kusahadzika pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti zvirizvo, uye kutaura nezvenyaya iyi yemumba, zvinofanirwa kuyeukwa kuti Banco Santander bhodhi revatungamiriri ratenderana pamusangano waro nhasi kuti risaenderere mberi nekugadzwa kwaAndrea Orcel semukuru weGroup. Dare rakazivisa kugadzwa kwaOrcel munaGunyana 2018, zvichiteerana netsika dzetsika, kusanganisira mwedzi mitanhatu ya zororo rebindu. Kutaurirana kwaive kwakakodzera kupihwa kukosha kwebasa rayo uye zvemitemo, zvemutemo nezvibvumirano.
El bhodhi revatungamiriri Santander akabva abvumirana nezvemubhadharo wepagore weramangwana uyo Orcel aizotambira sa CEO muSantander, zvinoenderana neya José Antonio Álvarez. Zvisinei, panguva iyoyo, zvaisaita kutarisira mari yekupedzisira kune iyo Boka yekubhadhara mubairo wakadzoserwa waakange apihwa pachinzvimbo chake chekare uye kuti angadai akarasikirwa nekusiya. Naizvozvo, kusarudzwa uku kwakaitwa pachishandiswa fungidziro yemutengo, zvinoenderana nezano rakagamuchirwa, zvakapfuura uye zvinotarisirwa kuti zvinogona kudzokerwa pasi nekuda kwechimiro chehukama pakati pemabhangi ese uye misiyano zviitiko zvavanoita.
Mari yepamusoro kubhangi
Mumwedzi ichangopfuura, vakaita hurukuro zvine chekuita nemitemo yekubva kwaOrcel kusangano raakashanda. Izvozvi zvave pachena kuti mutengo kunaSandander wekumuripa pamubhadharo wake wakanonoka pamusoro pemakore manomwe, uye mamwe mabhenefiti anomuwana pachinzvimbo chake chemberi ingangove mari iri pamusoro zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa nebhodhi panguva yechiziviso. kugadzwa kwako.
Bhodhi rinofunga kuti hazvingagamuchirike bhizinesi rekutengesa senge Santander kutarisana nemubhadharo wekuhaya munhu, kunyangwe iri yeiri nhanho uye nzira iyi maererano nehunhu hwesangano uye mutoro wainayo kune vatengi vayo. vanobatana uye makambani enyika dzairi kushanda. Muchirevo chechinyorwa chino, bhodhi rinofunga kuti hazvizove zvakakodzera kutevera enda mberi nekugadzwa.
Seti yemataira pane chati chati
José Antonio Álvarez, uyo akaenderera mberi ari CEO mushure mekuziviswa kwekugadzwa uye anga akaronga kutora chigaro chemutungamiri weSantander Spain munaKurume anotevera, acharamba ari CEO weboka iri. Saizvozvo, achatora chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiriri wedare. Rodrigo Echenique, uyo anga aronga kusiya chinzvimbo chake parizvino semutungamiriri weSantander Spain munaKurume, anoenderera mberi kusvikira kugadzwa kwemutsivi wake.
Mukati meichi chiitiko chakajairika, purezidhendi weBanco Santander, Ana Botín, akati: “Sebhangi rekutengesa, taifanira kuyera mutengo wakakwira wekuhaya nyanzvi, kunyangwe munhu ane tarenda Andrea Orcel, uyo aifanira kuripira kurasikirwa kwemakore manomwe emari yakadzoserwa, needu tsika yekambani, zvinoreva kuzvipira uye mutoro kuvashandi vedu, vatengi uye vagovani. Neichi chikonzero, kanzuru neni tinogutsikana kuti, kunyange hazvo iri danho rakaoma, isu takaita chaicho.
Chero zvazvingaitika, chimwe chezvinangwa zvebhangi iri kuzadzikisa huwandu hwe5 euros pamugove. To gare gare kuyedza zvimwe zvinangwa zvinangwa kubva kunzvimbo dzese dzekuona, uye ndipo panofanirwa kutungamirwa nzira nevemari. Mushure mezvose, icho chimwe chezvinangwa zvenguva pfupi-zveiyi bhizinesi rekutengesa. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndechekuti inobudirira. Hongu hazvizove nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Santander, munzira inoenda ku5 euros?
Ndedzipi mari diki dzinozivikanwa?
6 zvigadzirwa zvine njodzi zvekudzivirira mu2019